09 | novembre | 2009 | GAZETY_ADALADALA
Anafaro fianakaviana ny toy itony
Posted on 09/11/2009 by gazetyavylavitra
Raha ho any Antsirabe no dianao, na ny fianakavianao, dia mba tandremo ny toy ity.
Nentin’ny hamehana ireto olona vitsivitsy hiazo an’Antsirabe, ka raha tokony ho an’ny amin’ny fasan’ny karana no haka fiara fitaterana, dia notsenain’ny mpanera teo Anosikely (Anosy anoloan’ny Tranoben’ny Loholona). Isan’izy sasantsasany tamin’ny ankohonan’ny mpitantara. Fiara roa no teo. Tsy nisy nanampo ny sangisangy sy ny vazivazy nataon’ireo mpanera ny rehetra tao anaty fiara. Raha iny ilay mbola samy sondriana niandry izay hahafeno ny fiara iny tokoa mantsy ny rehetra (olona 2 sisa no nandrasana) dia ‘mifanala’ eo ivelany eo kosa ny mpanera sy ny namany, ka hoy indrindra ny iray tamin’izay (sady manondro tsirairay ireo fiara roa niantsona teo izy):
ity ilay mpanary an-dàlana, ary ity ilay mitsoaka vitesse
Rehefa feno àry ny fiara dia niainga nitodi-doha hianatsimo amin’izay. Naka solika sy nameno rivotra teo Ankadimbahoaka aloha. Teo dia efa nisy ny tranga nampiahiahy ny ramatoa iray izay nipetraka nanandrify indrindra ny kodiarana nofenoina rivotra farany. Nisy rangahy mihaja iray teo ivelan’ny fiara (toa mahay tsara ny mombamomba ny fiarakodia, hono, ilay ranamana). Nanontaniany ilay mpiasan’ny tobin-tsolika nameno ny rivotra hoe:
Ary tsy manary ve izany kodiarana izany r’ise?
Ie, manary ity
Rehefa vita ny nataony dia nahorony ny fitaovany, fa tsy niteny tamin’ingahy mpamily izy.
Roso indray ny fiara. Teny an-dàlana dia midoladola ilay kodiarana voalaza ka manary rivotra. Mandra-pahatonga tany aloha kelin’ Ambatolampy dia efa impolo kely angamba no nijanona (maty) ny fiara. Antony : Miakatra maripàna isaky ny roa kilometatra mahery eo ny fiara, indrindra moa fa rehefa miakatra fiakarana. Nananomboka ny menomenona sy ny fitakiana famerenam-bola avy amin’ireo mpandeha. Ingahy mpamily anefa tsy mety hamerim-bola fa hoe efa lany nividianana solika sy nanomezana ireo mpanera tany Anosy, hono. Hatreto dia nojerena sy navela nandalo fotsiny ireo fiara hafa nisongona ilay notaingenan-dry zareo.
Ny loza dia nisy tamin’ireny fahafatesan’ny fiara ireny no nitranga tao anaty fiolahana mampidi-doza, ka nanery ireo mpandeha tsy hijanona tao anaty fiara sy tsy nanaiky ny hanohy ny dia intsony, eny fa na dia tsy hamerim-bola aza ny mpamily (mba ho fitsinjovan’ireo mpandeha ireo ny ainy). Nanontaniana ny saran’ny dia hatreo Ambatolampy ka voalaza fa 3000 Ariary (tsy mbola ao anatin’io ny saran-dàlana hankany Antsirabe).
Nisy fiara avy any atsimo ka nahalàla ity mpamily hafa kely ity, ary nanontany azy izay mitranga, dia hoy ingahy io:
Misôfy nedala sady mi-gondole ny motera sady niala ny vitesse
Marihàna fa isak’izay misôfy ny fiara dia mivoaka miaraka amin’ny fasian-drano roa ingahy mpamily ary mitady tanimbary na renirano mba hantsaka sy hameno ny radiateur. Toy izany hatrany eraky ny làlana. Ary dia lasa fihomehezana hatrany ny mahita azy sy ny patalohany mila hiborotsaka mitondra ireo tavin-drano roa miakatra avy any an-dohasaha any. Nanampy trotrka koa moa ny fisian’ny vehivavy iray marary saina nentin’ity mpamily ity (izay nivavaka mihitsy ny hivarinan’ny fiara any anaty hantsana, hono, fa izy efa te-ho faty nefa tsy mety maty mihitsy). Asa na ahoana no mba fipetraky ny raharaha toy izany? Tena tsara raha izy sy ny mpamily irery no niara-dàlana fa angamba nety ho tonga tamin’ny tanjona niriany.
Dia nifanaraka teo ny roa tonta (ilay fiara avy any atsimo sy ingahy mpamily) ny amin’ny handefasana ireo mpandeha hamonjy an’Ambatolampy. Tsy ny rehetra anefa no hanana vola amboniny hiatrehana ny toy izany ka dia nisy ankohonana telo teo angamba no tavela niaraka tamin’ingahy mpamily sy ny fiarany teo amin’ilay toerana.
Tao Ambatolampy indray vao nàka fiara hafa sy nandoa vola amboniny namonjy an’Antsirabe. Ireo olona maika rehetra ireo dia tao ny hamonjy dokotera tao an-tampon-tanàna, tao ny hamonjy fahoriana tany Betafo sns…
Koa anafaro fianakaviana ny toy itony, ary indrindra indrindra, tandremo ny fiara TOYOTA 1288 TAG , fa io moa no laharany. Tsy voalaza tamiko ny Kaoperativa misy azy. Fa raha tamin’ny 6ora sy sasany maraina ny fiara no niala teo Anosy, ary nihevitra ny ho tonga tany Antsirabe amin’ny 9 ora sy sasany na amin’ny folo ireo mpandeha rehetra tao anatiny, dia efa nihilàna ela ny masoandro vao niditra ny tanànan’ny Ranovisy ry zareo.
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, tapatapany | Tagged: 1288 TAG, Anosy, Antsirabe, fasan'ny karana |	Leave a comment »